Nnukwu eji maka mmanụ oyibo - Ndụmọdụ Na Nnukwu Echiche!
sangria uzommeputa na piich schnapps na brandi
mkpọ eyed ojii na ham
malibu aki oyibo rọm na ihe ọ juiceụ cụ kranberị
-esi mee ka a denver omelet
ihe na-aga nke ọma na taco salad
Nnukwu eji maka mmanụ oyibo
Hụrụ ya n'anya? Ntụtụ ya ka ọ zọpụta ya!
Hapụ atụmatụ nke aka gị n'okwu ndị a n'okpuru!
Gbanyụọ eji maka aki oyibo
Aki oyibo bụ ihe ụtọ na-atọ ụtọ, nke sitere n'akụkụ akụkụ abụba nke mmiri oyibo. Ọ bụ ihe dị mma, vegan dochie anya mmanụ mmanụ na kichin, ma jiri ya na mmiri na ihe ịchọ mma gburugburu ụwa. Aki oyibo bara ọgaranya na lauric acid, nke na-eme ka ọ dị mma maka ahụ gị dum, n'ime na n'èzí! Lelee ndị a ọzọ dị ukwuu eji maka aki oyibo mmanụ! (Can nwere ike jidere mmanụ aki oyibo n'ọtụtụ ụlọ ahịa nri, ụlọ ahịa nri ahụike ma ọ bụ ịnwere ike ịzụta aki oyibo mmanụ online ).
Moisturizer: Dị ahụ dị egwu, silky nke dị mma na nri gị na-adị ka anụ ahụ gị! Ete aka ụfọdụ ụtọ mmanụ oyibo mmanụ nri na na akpụkpọ gị aka rebalance gị eke mmanụ. Ọ dịkwa mma maka ntutu gị na mbọ, ya mere, kpochaa ya ebe niile!
Ihe akara: Ime afọ na mgbanwe mgbanwe nwere ike ime ka mgbatị na ahụ gị niile. Iji nwetaghachi azụ anụ nwata gị, tee ya mmanụ oyibo. Ọ ga - enyere aka kpochapụ akara gị ma mee ka akpụkpọ ahụ gị nwee ahụ ike, na - eme obi ụtọ ma nwee obi ụtọ.
Ero: Bibie mkpịsị ụkwụ mkpịsị ụkwụ na ọrịa ụkwụ ndị ọzọ jọgburu onwe gị site na ịtinye ụkwụ gị na mmanụ oyibo ma na-ete ya. Ọ ga-alụ ọgụ megide nsị na-enweghị ísì kemịkal ahụ dị mma!
kedu ihe di iche na agwa mmiri na oke ugwu
Chịngọm: Wepu chịngọ ahụ na ntutu gị na-enweghị akwa. Bido n’okpuru chịngọm ahụ, tee mmanụ aki oyibo n’elu eriri ndị ahụ ruo mgbe ị ruru chịngọm. Mgbe ahụ, malite na mgbọrọgwụ, rụọ ọrụ ala. Ka ọ nọdụ otu obere oge, tinyezie mkpịsị aka gị na mmanụ ọzọ. Gọm ahụ kwesịrị ịmalite ịgba gburugburu. Nwere ike tufuo eriri ole na ole, mana ọ ka mma karịa iwepụ ya niile!
Egbugbere ọnụ Balm: Afọ kachasị nke egbugbere ọnụ gị niile, mmanụ a ga-enyere gị aka ịghaghachi egbugbere ọnụ gị. Ọ na-eme ka egbugbere ọnụ gị dị nro ma dị mma maka ezinụlọ dum iji ya.
Dochie Butter: Nke ahụ dị mma! Enwere ike iji mmanụ aki oyibo dochie bọta na ọtụtụ usoro nri gụnyere mmiri. Jiri otu ego mmanụ oyibo dịka ị ga-eji bọta! Ọ dịkwa ụtọ ịkọ mmiri veggies ma ọ bụ gbasaa na tost!
Eke anwụ: Ọ gwụla ma ị dị oke ncha ma ọ bụ gbaa ọkụ n'ụzọ dị mfe, SPF dị ala nke mmanụ aki oyibo nwere ike zuru ezu maka ọpụpụ oge ọkọchị gị. Kpoo ya kwa ubochi maka igbochi oria akpukpo aru!
-esi mee ka ọkụkọ na oporo fajitas
Acne: Iwepu ihe otutu nwere ike buru oke ibu, ma i nwere ike i kpo ahihia ahihia na ahihia oku. Jidere ụfọdụ mmanụ aki oyibo! Kpoo ya nwayọ n'ime ebe oria a, ebe obula i no, ma lekwa anya ka otutu oge.
Isi ahịhịa: Ọ bụrụ na akpụkpọ gị dị oke nhịahụ maka ịzụrụ ihe eji azụ ahịa, gbalịa nke a: jikọta mmanụ oyibo na shuga ruo mgbe mmanụ ahụ na-acha ọka. A na-ekpocha mkpokọta ọnụ n'ime ite ikuku na-eme ka ọnwa isii ruo otu afọ, yabụ mee ụyọkọ, tinye ya n'ime!
Ahụhụ ahụhụ: Anwụnta a na-apụghị izere ezere na nkwonkwo ụkwụ gị agaghị eguzo na ike ịgwọ mmanụ mmanụ oyibo! Kpoo ntakịrị n’elu arụ ahụ iji nyere gị aka ịmịchaa ọkọ ahụ, hichaa mbufụt ahụ, wee mee ka anụ ahụ gị laa n’iyi ma mara mma n’oge adịghị anya.
Oge a Cast Iron Pan: Aki oyibo mmanụ nwere ike iji oge a igba ígwè pan! Lelee Gluten anaghị eri anụ maka otu esi eme nke a!
Osisi Polish: Were ntakịrị mmanụ si n’ime ite ahụ were nkịrịka nkịrịsị ma tee ya n’ime arịa osisi gị kaa akara. Mmanụ ga-enwu gbaa nkụ gị, na-enweghị isi dị ọcha ma ọ bụ streaks!